Warehouse Manager at Shwe Phon Co.,Ltd | MyJobs
ရန်ကုန် ရွှေပြည်သာ ၀ါးတစ်ရာ စက်ရုံတွင်ခန့်ရန်
Warehouse Manager 1 post (M)
၁. တက္ကသိုလ်မှ ဘွဲ့တစ်ခုခုရရှိပြီးဖြစ်ရမည်။ လယ်ယာသုံးစက်ကိရိယာလုပ်ငန်းနှင့် ဆက်စပ်မှုရှိပါက ဦးစားပေးမည်။
၂. အသက် (၃၅-၅၅) နှစ်အတွင်း ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သည့် အမျိုးသား ဖြစ်ရမည်။
၃. စက်ရုံလုပ်ငန်းနှင့် ၀န်ထမ်းစီမံ ခန့်ခွဲမှု အ တွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၅ နှစ်အထက်ရှိသူ ဖြစ်ရမည်။
၄. Team Work ကို ကောင်းစွာ သိနားလည်ပြီး အများနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိူင်သူဖြစ်ရမည်။
၅. ရွှေပြည်သာ စက်မှုဇုံ (၀ါးတစ်ရာ) စက်ရုံတွင် ညအိပ်နေထိုင်ပြီး လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နိူင်ရမည်။